Ungawutshintsha njani umbala we-Facebook? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 377
Okokuqala, kubalulekile ukuba uthathe ingqalelo kwi-Facebook; kwayes Inethiwekhi yokuncokola ibonwa kwihlabathi liphela njengeyona ithandwayo okanye igcwele, isebenza ukuxhasa unxibelelwano, kunye nokuvelisa umxholo, Omnye umsebenzi kukuba ungagcina ubudlelwane phakathi kwakho nabani na nokuba uphi emhlabeni.
Imikhombandlela yokutshintsha umbala ube mnyama kwikhompyuter
Kuyimfuneko ukwazi ukuba mibini kuphela imibala eyahlukeneyo evunyelweyo nguFacebook; i "imowudi emnyama" kunye nemowudi yesiko. Kuya kufuneka sazi ukuba yenye yeendlela zonxibelelwano ezimbalwa ekungafuneki ukuba uzisebenzise nge-100% kufuneka ube neselfowuni, ezinye iinkcukacha onazo xa usebenzisa imowudi yakudala zezi:
Yehlisa ibhetri ngokukhawuleza okukhulu kwii-laptops nakwii-smartphones.
Inokuba nefuthe elibonakalayo kwamehlo akho.
Kodwa ukuthintela konke oku sele kukhankanyiwe, imowudi emnyama yenziwa. Kuba igcina ibhetri eninzi xa usebenzisa inethiwekhi kwaye ayigqibi amehlo akho kakhulu xa uyisebenzisa.Imowudi emnyama iqale ngohlaziyo olutsha. Ukuqala, kuya kufuneka ufumane uhlaziyo olutsha oluza kwenziwa emva kokunika utolo olubonisa ukhetho oluninzi kwaye ucofe ku tshintshela kuhlobo olutsha lwenethiwekhi yoluntu.
Kwimeko apho olo khetho lungaphumiyo, kuya kufuneka ube nomonde ngalo naliphi na ixesha uyakongezwa. Emva kokuba uyilo lwakho olutsha lulungile Kuya kufuneka ucofe utolo olukhankanywe apha ngasentla kwaye wenze imowudi emnyama yokukhetha.
Imikhombandlela yokwenza imowudi emnyama kwisixhobo sakho se-Android okanye se-iOS
Kuya kufuneka uyazi ukuba olu khetho kwezi zixhobo alufumaneki okwangoku kubo bonke abasebenzisi, luya kusasazeka ngokuthe ngcembe. Ukuze usebenze kufuneka ucinezele iqhosha le-Facebook, ibekwe ezantsi kwesikrini.
Xa ungena apho utyibilika phantsi kwaye ufaka useto kunye nemfihlo, uya kubona ukhetho kwaye kuyakufuneka ucofe kuphela, kunye nesicelo sakho sokuqala siya kwahluka kunangaphambili.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ayizizo zonke iinethiwekhi zentlalo ezinokhetho. Kwakhona ngokusebenzisa ezinye iinkqubo unokutshintsha i-logo njengoko ibonakala kwi-Smartphone yakho. Zininzi, nazi ezinye:
Umqalisi weCm 3D.
Ingasetyenziselwa ikhompyuter yakho okanye iLaptop, kuya kufuneka ukhuphele umfanekiso kwifomathi yeico. ukunika iqhosha lasekunene lempuku kwaye uya kukhetho lweepropathi.
Nje ukuba ufike apho uya kwenza ngokwezifiso, khetha ifayile kwaye xa ukhetha ifoto kunye nefomathi yeico. Nje ukuba kwenziwe oko kuya kuba kulungile kwaye uya kuba nakho ukonwabisa amehlo akho ngefoto entsha yesicelo sakho osithandayo. Kwimeko apho ingasebenzi kuwe jonga ukuba wenza amanyathelo ngokuchanekileyo ukuba iyaqhubeka nokusilela, ndincoma ukuba ubukele isifundo sevidiyo.
1 Imikhombandlela yokutshintsha umbala ube mnyama kwikhompyuter
1.1 Imikhombandlela yokwenza imowudi emnyama kwisixhobo sakho se-Android okanye se-iOS
2 Ingqwalaselo yokugqibela
Ungayicima njani imiyalezo ye-WhatsApp?